Accueil > Gazetin'ny nosy > Adim-piainana : Fitrosana sy fivarotam-pananana no hany vahaolana
Adim-piainana : Fitrosana sy fivarotam-pananana no hany vahaolana
Na mbola tsy nisy aza ny Coronavirus dia efa niaina ao anatin’ny fahasahiranana lalina ny ankamaroan’ny Malagasy. Tsiahivina ihany fa tamin’ny taona 2019, ny 74 isan-jaton’ny Malagasy no miaina ao anatin’ny fahatrana lalina raha ny tatitra navoakan’ny Banky iraisam-pirenena, izany hoe mivelona amin’ny vola latsaky ny 1,90 dolara amerikanina isan’andro. Mbola nitombo io tarehimarika tamin’ny taona 2020, niakatra 77%. Nanampy trotraka izany fahasahiranan’ny Malagasy izany ny fisian’ny valan’aretina izay anisany tena nitarika ny fisondrotry ny vidim-piainana. Saika nahitana fiakarana avokoa ny vidin’entana eny an-tsena kanefa ny fahefa-mividin’ny vahoaka tsy nisy fiovana fa vao maika nihena aza.
Manoloana izany indrindra, samy mitady ny fomba hiatrehana ny adim-piainana mafy ny ankamaroan’ny olom-pirenena na ny tokantrano tsirairay, ankehitriny, indrindra fa ireo mafy sy ny mitrongo vao omana. Tsy ampy hiatrehana ny fiainana ny karama na ny vola kely miditra ka ny fitrosana sy fivarotam-panana sisa no hany vahaolana ho an’ny tokantrano maro. Tsy ny fisedrana olana tampoka na fanaovana adidy no hanaovana trosa fa na amin’ny fiainana andavan’andro aza dia betsaka no tsy misy sakafo harapaka raha tsy mihindram-bola amin’ny fianakaviana na olom-pantatra.
Ho an’ireo tsy mahita olona hitrosana satria mety sahirana daholo koa ny fianakaviana rehetra, dia vahaolana ihany koa ny fivarotam-panana ka izay entana kely ao an-trano no havadika vola. Raha mandehandeha mitety fokontany eto Andrenivohitra, dia hita fa maro no mivarotra entana eny amin’ny sisin-dalana na any anaty elakelan-trano rehetra any. Tsy resahina intsony moa ny fitadiavam-bola amin’ny fomba ratsy, toy ny fangalarana, fisolokiana amin’ny endriny samihafa na koa ny fivarotan-tena izay tena lasa mirongatra eto amintsika. Ireo trangan-javatra ireo no manaporofo fa miha mafy ny adim-piainana ho an’ny Malagasy, ary mbola hitombo izany trangan-javatra izany raha tsy misy ny vahaolana maty paika sy mahomby avy amin’ny fitondram-panjakana.